Dzimwe Mibvunzo dzeVaverengi Dzinopindurwa Yekare Sita: Ebooks | Linux Vakapindwa muropa
A kanguva yapfuura zvakaitika kwandiri kuti ndirangarire lzvikamu zvekare zvetsamba dzevaverengi kubva kumagazini akakurumbira. Yakanyorwa nenzira yakasarudzika ivo vaive vepedyo chinhu kumapoka eFacebook pamapepa.
Zvichienderana nemusoro wenyaya wemagazini, unogona kubvunza mibvunzo inopindurwa nevapepeti uye zvakare kuwana kero dzekutsinhana tsamba nevamwe vanhu vane zvido zvakafanana.
Kushandisa iwo iwo mutoo wemibvunzo nemhinduro zvenguva, tichaedza kuyedza kugadzirisa zvimwe zvinonetsa zvinokanganisa linuxeros.
1 Mimwe mibvunzo kubva kuvaverengi
1.1 Pfungwa dzekuona
1.1.1 Iyo nzira
1.1.1.1 Kuziva zvinyorwa mumifananidzo
1.2 Zvinhu zvekunzwa!
1.2.1 Iyo nzira
Mimwe mibvunzo kubva kuvaverengi
Lords Linux Vanopindwa muropa
Ndine muunganidzwa wemabooks akatengwa muchitoro chemabhuku chinonzi Rio de América del Sur. Ini ndakanyatso tarisisa uye sarudzo dzekumisikidza dzegore muverengi (iyo application haichashande pasi peWine) haina kukwana kuti ndiverenge zvakanaka.
Imwe nguva yapfuura pakanga paine plugin yeCaliber iyo yaikubvumidza iwe kuti ubvise DRM uye uverenge pamwe ne ebook muverengi. Asi, hazvichakwanise.
Unogona here kuratidza imwe nzira?
Anodiwa Mr Magtux:
Sezvaunonyatsonongedza, iyo Caliber yekuwedzera-kubvisa DRM haina kushanda. Imwe nzira ndeyekutora zvidzitiro zvepeji rega rega mune raibhurari yegore kuverenga uye wozoisa hunhu kuziva Neraki, ino chiitiko chinogona kugadziriswa.
Unoda mapurogiramu maviri anowanikwa mune zvinyorwa zvechero kugoverwa kweLinux.
Xdotools: Inofanidza kudzvanya bhatani regonzo nguva dzese dzakatarwa .. Tiri kuzoishandisa kutendeuka peji.
Scrot: Tora zvidzitiro.
Nekuzivikanwa kwehunhu iwe unoda mapakeji
mutsessact uye musess.spa
Gscan2pdf kana iwe uchida graphical interface.
Vhura browser rako uye enda kune iro kuverenga kwegore. Tsvaga bhuku uye enda kumberi peji.
Vhura iyo terminal uye uideredze. Tsvaga iyo kuruboshwe kuruboshwe rwebrowser.
Mumhando yekupedzisira xdotool vanowana asi usamanikidze Pinda.
Uya ne pointer pakati pechidzitiro uye kumuganhu wekurudyi. Dhinda Pinda.
Cherekedza iyo X uye Y kukosha.
Vhura iwo edhita edhita uye kuteedzera zvinotevera:
Rangarira kutsiva X uye Y nemitengo inoenderana. Sevha iyo faira se script.sh. Wobva waendesa chinongedzo kune iyo faira icon uye nekona bhatani tinya Propiedades. Iipe mvumo yekuita.
Vhura iyo script ne ./script.sh, gadza iyo browser kuti izere skrini uye mirira kuti ipedze kutora ese mapeji. Iwe uchazoona kana bhuku rapera.
Minimize browser uye uvhare iyo terminal.
Enda kune iyo Mifananidzo folda uye bvisa iwo ausingade.
Kuziva zvinyorwa mumifananidzo
Kana ikakupa meseji yekukanganisa, usaite hanya nayo. Dzvanya paVhura uye isa zvese mifananidzo.
Enda kumenu Zvishandiso / OCR.
Sarudza Mapeji ese, sarudza mutauro uye tinya Kutanga OCR.
Kamwe kuzivikanwa kwapera, tinya Sevha, sarudza Chinyorwa senge fomati, ipapo nzvimbo uye zita refaira.
Vhura iyo faira neLibreOffice, gadzira ese mafomati shanduko aunoda, uye chengeta sePDF kana Epub.
Vadiwa shamwari dzeLinux Vakapindwa muropa,
Ini ndinofamba zvakanyanya pakutakura veruzhinji (kazhinji pamakumbo angu) uye radio neepodcast zvakanditakura zvakanyanya.
Kune here akavhurwa sosi ezvirongwa ekugadzira audiobooks kubva ku ebook dzangu paWindows?
Anodiwa mufambi anofinhwa:
Kutora mukana wemanzwi ekuverenga skrini iyo Windows inosanganisira, uye matatu akavhurwa masosi ekunyorera iwe unogona kugadzira audiobooks kubva kune ako ebook pasina matambudziko.
Iwo mapurogiramu aunoda matatu:
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuenda kune iyo Windows yekumisikidza pani, sarudza sarudzo Mutsananguro Kuwanika uye sarudza izwi raunonyanya kufarira.
Caliber inoumbwa nezvirongwa zvitatu, maneja wekuunganidza, iyo ebook mupepeti uye muverengi webook. Izvi ndizvo zvatiri kuzoshandisa.
Isa chinongedzera pamusoro pebhuku iwe chaunoda kuchinjira kune odhiyo uye nekobhatani rorudyi tinya Vhura neEbook Viewer.
Enda kune peji rekumba.
Vhura OBS Studio uye kana iwe usina kudaro, tanga iyo setup wizard mune yakagadziridzwa yekurekodha sarudzo.
Dzvanya pachiratidzo + uye Sarudza sarudzo Rekodha odhiyo kuburitsa.
Dzvanya Kutanga Kurekodha.
Dzokera kumuverengi weCaliber uye dzvanya Verenga zvinonzwika.
Paunopedza kuverenga unogona kumisa kurekodha muOBS STUDIO.
Iwe ungangoda kubvisa dzakafa nguva uye kukamura muzvitsauko. Unogona kuita izvi ne Audacity.
Mu Audacity iwe unongofanirwa kuisa pointer kwaunoda kucheka, tinya kuti uise mucherechedzo uye dhonza nzvimbo yacho kuti uisarudze. Ipapo iwe unogona kuteedzera, kunama muhwindo idzva uye chengeta mune yako yaunofarira odhiyo fomati.
Maitiro ese aya anogona kuitwawo paLinux, iwe unongofanirwa kuisa pasuru kutaura-mutumwa. Asi izwi rinoguma raita kunge robhoti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mimwe Mibvunzo Yevaverengi Yakapindurwa Yekare Sita: Ebooks
Inonakidza inonakidza kwazvo. Uye kupi kwaunofanira kutumira kusahadzika kwako?
Kune rimwe divi, iyo yekutanga nhaurwa, iya yaVaMagtux, pane here imwe nzira yekuremekedza muLinux yese kana Windows kuitira kuti mwana asaite zvese izvo zvinhu?
Fomu remashoko rinoshanda, kana pazasi pezita rangu iemail yangu uye ma network
Ehe, kune dzimwe nzira. Semuenzaniso, TextAloud, asi inobhadharwa
Hapana kukanganisa asi ini ndinowana maitiro avanokurudzira Mr Magtux zvinosetsa zvinorema (tisingataure nezvekurwadziwa kwekusvirana padhongi, kunyanya kana uine mabhuku mazhinji). Hazvingave nyore kurodha pasi-isina mavhezheni e DRM-emabhuku kubva kunzvimbo dzakaita seLibgen kana Epublibre (kana ini ndatozvibhadharira saka ini handioni dambudziko rekuve ne "backup" yekuwedzera kuverenga chero kupi)? Pakupedzisira, nzira iyoyo inofanirwa kuve yakachengeterwa mabhuku asingawanzo kana nevanyori vashoma vanozivikanwa kubva pari pirated vhezheni dzisingawanikwe
Haasi ese mabhuku ari munzvimbo idzodzo (Zvirinani ndizvo zvandakaudzwa neshamwari)